I-Suleiman i-Biographical Biography
"UMniki-mthetho" wobukhosi base-Ottoman
Wazalelwa ngoNovemba 6, 1494, ukusuka ecaleni laseTurkey loLwandle oluMnyama, uSulemim oMkhulu kakhulu waba ngubukhosi bobukhosi base-Ottoman ngo-1520, echaza "iGold Age" kwimbali ende yobukhosi ngaphambi kokuba afe ngoSeptemba 7, 1566.
Mhlawumbi eyaziwayo ngokugqithisa kwakhe urhulumente wase - Ottoman ngexesha lokulawula kwakhe, uSolimim wayeyaziwa ngamagama amaninzi kuquka "uMniki-mthetho" kunye no "Selim Umdakwa," kuxhomekeke kubani owacelayo.
Ubunono bakhe obucebileyo kunye negalelo elicebileyo kummandla kunye noBukumkani banceda ukuba kube ngumthombo wobutyebi obukhulu kwimpumelelo kwiminyaka ezayo, ekugqibeleni ukukhokelela kwisiseko seentlanga ezininzi eYurophu naseMiddle East esiyazi namhlanje.
Ubomi bokuqala beSultan
USolenim wazalwa yedwa unyana ohlala e-Sultan Selim I wolawulo lwase - Ottoman kunye no-Aishe Hafsa Sultan weCrimean Khanate. Njengomntwana, wafunda kwiNdlunkulu yaseTopkapi e-Istanbul apho wafunda khona inkolo, iincwadi, inzululwazi, imbali kunye nemfazwe kwaye yaba nezilimi ezintandathu ezibandakanya ulwimi lwe-Ottoman Turkish, isi-Arabhu, isiSerbia, isiCarata, isiTurkey (esifana nesi-Uighur), i-Farsi, kunye Urdu.
U-Suleiman wathandwa kakhulu nguAlexandro Omkhulu ebusheni bakhe kwaye emva koko kwandiswe inkqubo yokwandiswa kwempi eyenziwe ukuba iphefumlelwe yinxalenye ka-Alexander. NjengoSultan, i-Suleiman yayiza kubakhokela iindwendwe ezili-13 ezinkulu zemikhosi kunye nokuchitha iminyaka engaphezu kwe-10 engama-46 ubudala.
Uyise, uSultan Selim I, waphumelela ngokuphumelelayo waza washiya unyana wakhe kwindawo ekhuselekileyo kunye nabaJanise ngokuphakama kokunceda kwabo; AmaMamluk awanqotshwa; kunye negunya elikhulu elwandle laseVenice, kunye nePersian Safavid Empire , ethotywa yi- Ottomans . U-Selim wamshiya unyana wakhe iinqanawa ezinamandla, owokuqala kumlawuli waseTurkey.
Ukuphakama ukuya kwisihlalo sobukhosi
Uyise kaSusiman wanikela unyana wakhe ngolawulo lweemimandla eyahlukeneyo eMbusweni wase-Ottoman ukususela kwiminyaka elilishumi elinesixhenxe, kwaye xa uSulemim engama-26, uSelim wafa waza uSoliman wenyuka esihlalweni ngo-1520, kodwa nangona uneminyaka ubudala, unina wayekhonza .
I-sultan entsha yaqalisa ngokukhawuleza inkqubo yakhe yokunqoba impi kunye nokwandiswa komkhosi. Ngomnyaka we-1521, wafaka ukuvukela kwidolophu yaseDamasko, i-Canberdi Gazali. Uyise kaSusiman wayinqobe le ndawo eseSiriya ngowe-1516, ukuyisebenzisa njengowomda phakathi kweMamluk kunye neBukhosi baseSafavid apho babemisele khona uGarzali njengorhuluneli, kodwa ngoJanuwari 27, 1521, uSulemim wanqoba uGazali, owafa ekulweni .
NgoJulayi ngomnyaka ofanayo, i-sultan yazingqinga iBelgrade, isixeko esinqatyisiweyo kuMlambo waseDanube. Wasebenzisa zombini umkhosi osemhlabeni kunye ne-flotilla yeenqanawa zokukhusela umzi kwaye ukhusela ukuqiniswa. Ngoku eSerbia, ngelo xesha iBelgrade yayingowombuso waseHungary. Kwawa ngamandla kaSoliman ngo-Agasti 29, 1521, ukususa umqobo wokugqibela kwi-Otomoman ukuya kwi-Yurophu Ephakathi.
Ngaphambi kokuba aqalise ukuhlasela kwakhe okukhulu eYurophu, uSleiman wayefuna ukunyamekela i-gadfly ephazamisayo kwiMeditera-yamaKhristu ase- Crusades , i- Knights Hospitallers esekelwe kwiSiqithi saseRhodes ibambe i-Ottoman nezinye iinqanawa zeentlanga zamaSilamsi, kuthatha impahla yeenkozo kunye negolide kunye nokugqilaza abasebenzi.
I-Knights Hospitallers 'i-piritike yayibangelwa ngamaSulumane ayenqumla umkhumbi ukuba enze iHaj, uhambo oluya eMecca lenye yeentsika ezihlanu ze-Islam .
Ukulwa namaKrestu okuThuthukiswayo e-Rhodes
Ngenxa yokuba uSelimi ndizamile kwaye ndahluleka ukuwaxosha amaKnights ngowe-1480, amashumi angama-30, angama-knights asetyenziswa ngamaSilamsi abasebenzi bezakhoboka ukuze baqinise kwaye baqinise iinqaba zabo kwisiqithi ngokulindela enye i- Ottoman besiege .
I-Suleiman ithumele ukukhuseleka ngesimo se-armada yeenqwelo ezingama-400 ezithwele ubuncinane imikhosi eyi-100 000 eRhodes. Baye bafika ngoJuni 26, 1522, baza bazingqinela iziseko ezingama-60,000 ezimela amazwe aphesheya aseNtshona-Yurophu: i-England, iSpain, iItali, iProvence neJamani. Okwangoku, uSleiman ngokwakhe wahokela umkhosi wamandla okhuselo ukuya kummandla wonxweme, waya eRhodes ngasekupheleni kukaJulayi.
Kuthatha phantse isiqingatha somnyaka wee-artillery bombardment kunye nokucima iimigodi phantsi kweendonga zelitye ezintathu, kodwa ngoDisemba 22, 1522, amaTurks ekugqibeleni aphoqeleka onke amaKristu angamavili kunye nabemi baseRhodes ukuba bazinikezele.
U-Suleiman wanikela ii-knights iintsuku ezilishumi elinesibini ukuqokelela impahla yazo, kuquka izixhobo kunye neempawu zezenkolo, kwaye ushiye isiqithi kwiinqanawa ezingama-50 ezibonelelwa ngama-Ottomans, kunye neeninzi zee-knights ezifudukela eSicily.
Abantu bendawo baseRhodes nabo bafumana imimiselo kwaye babeneminyaka emithathu ukuba bathethe ukuba ngaba bafuna ukuhlala eRhodes phantsi kolawulo lwase-Ottoman okanye bahambe kwenye indawo. Abayi kuhlawula irhafu kwiminyaka emihlanu yokuqala, kwaye uSoliman wathembisa ukuba akukho necawa zawo eza kuguqulwa zibe yimikhosi. Ininzi yabo yagqiba ukuhlala xa uMbuso wase-Ottoman uthatha phantse ukulawula ngokupheleleyo kwimida yaseMedithera.
I-Suleiman ibhekane neengxaki ezininzi ezongezelelweyo ngaphambi kokuba akwazi ukuhlasela kwakhe eHungary, kodwa iingxabano phakathi kwabakwaJanny nase-1523 ukuvukelwa kwamaMamluk eYiputa zazingekho iziphazamiso zesikhashana - ngo-Aprili 1526, uSuimiman waqalisa umda ukuya kwi-Danube.
Ngo-Agasti 29, ngo-1526, u-Suleiman wamtshaya uMongameli uLouis II waseHungary kwiMfazwe yaseMohacs waza wamxhasa uYohn Zapolya njengowokumkani waseHungary ozayo, kodwa ama-Hapsburg aseAustria aphakamisa enye yeenkosana zawo, umntakwabo kaLouis II, umthetho, uFerdinand. AmaHafsburg aye ahlala eHungary aze athathe uBuda, afake uFerdinand etroneni, aze ahlasele iminyaka emininzi kunye noSoliman kunye noMbuso wase-Ottoman.
Ngomnyaka we-1529, uSolimim wahamba waya eHungary kwakhona, ethatha iBuda kwi-Hapsburgs kwaye waqhubeka ejikeleze i-Hapsburg capital eVienna. Umkhosi waseSulenim mhlawumbi u-120 000 wafika eVienna ngasekupheleni kukaSeptemba, ngaphandle kweyona nto ininzi yokuxhoba kwayo. Ngo-Oktobha 11 nangama-12 waloo nyaka, bazama ukuxhatshazwa ngabalindi abangama-16 000 base-Viennese, kodwa iVienna yakwazi ukuyikhupha kwakhona, kwaye amabutho aseTurkey ahamba.
I-Ottoman sultan ayizange igxile kwingcamango yokuthatha iVienna, kodwa inzame yesibini, ngo-1532, yayinokuphelelwa yimvula kunye nodaka, kwaye umkhosi awuzange ufikelele kwinkunzi yaseHafsburg. Ngomnyaka we-1541, ezo zombini zombuso zabuyela imfazwe kwakhona xa ii-Hapsburg zibeka i-Buda, zizama ukususa umlingani kaSusiman kwisihlalo sobukhosi saseHungary.
Abantu baseHungary nabakwa-Ottoman banqoba ama-Austrian, baza bathabatha ii-Hapsburg ezongezelelweyo kwi-1541 kwakhona kwakhona ngo-1544. UFerdinand wanyanzelwa ukuba alahlekelwe ukuba wayeyinkosi yaseHungary kwaye wayefanele ahlawule iSleiman, kodwa njengoko zonke iziganeko zenzeke ngasenyakatho nentshonalanga yeTurkey, iSuimiman kwafuneka ihlale iliso emngceleni walo osempuma nePersia.
Ubukhosi basePersian baseSafavid beyinto yamabutho amakhulu ase-Ottoman kunye nomnye "umkhosi wombhobho ." Umlawuli walo, u-Shah Tahmasp, wayefuna ukunyusa impembelelo yasePersi ngokubulala umlawuli wase-Ottoman waseBaghdad waza wamthabatha inopopi yasePersi, kwaye ngokuqinisekisile igosa laseBitlis, empuma yeTurkey, ukuba afunge ukuthembeka kwiTrone yaseSafavid.
U-Suleiman, uxakeke eHungary naseAustria, wathumela i-vizier yakhe enomkhosi wesibini ukuba athathe iBitlis ngowe-1533, owawuthatha uThabriz, ngoku e-mpuma ye- Iran , ukusuka kumaPersi.
USolimim yena ngokwakhe wabuya e-Ostriya ngokuphindaphindiwe kwesibili waza wangena ePersia ngo-1534, kodwa u-Shah wenqaba ukuhlangabeza ama-Ottoman evulekileyo, ehoxisa enkqantosini yasePersi kunye nokusebenzisa i-guerrilla ehlasela iTurks. USleiman wabuyisela iBaghdad waza waphinde waqinisekiswa njengentambo yeqiniso yehlabathi lamaSulumane.
Ngo-1548 ukuya ku-1549, u-Suleiman wagqiba ekubeni ahlasele i-spinfly yakhe yasePersi ngokulungileyo kwaye waqalisa ukuhlasela kwesibili kweBukhosi baseSafavid. Kwakhona, uTahmasp wenqabe ukuthabatha inxaxheba kwimfazwe enqabileyo, ngeli xesha elikhokela umkhosi wase-Ottoman ukuya kwiindawo ezikhethiweyo zeNtaba zaseCaucasus. I-Ottoman sultan yafumana intsimi yaseGeorgia kunye nemida yaseKurdish phakathi kweTurkey nePersia kodwa yayingeke ifikelele kwi-Shah.
Ingxabano yesithathu kunye yokugqibela phakathi kweSeliman neTahmasp yenzeka ngo-1553 ukuya ku-1554. Njengokuba njalo, i-Shah yayigweme impi evulekile, kodwa uSoliman wahamba waya ePersia waza wawachitha. U-Shah Tahmasp ekugqibeleni wavuma ukuba asayine umnqophiso kunye ne-Ottoman sultan, apho wafumana ulawulo lweThabriz ngokutshintshisa ukuthembisa ukuxhatshazwa kwemida eTurkey, kwaye ukugxotha ngokupheleleyo amabango akhe eBaghdad nakwezinye i- Mesopotamiya .
Izizukulwana zase-Central Asia, amaTurkey ase-Ottoman ayengenalo isithethe sembali njengamandla ohambo. Nangona kunjalo, uyise kaSoliman wasungula ilifa le-Ottoman eLwandle lweMeditera , uLwandle Olubomvu, kunye neLwandle lwase-Indiya ukususela ngo-1518.
Ngethuba lolawulo lukaSulemiman, iinqanawa zase-Ottoman zaya kwiindawo zokurhweba zaseMughal zaseIndiya , kwaye i-sultan yayitshintshana iincwadi kunye noMlawuli kaMughal uAbar Omkhulu . Iinqwelo zaseMedithera zeMedithera zajikeleza ulwandle phantsi komyalelo we-Admiral Heyreddin Pasha odumile, owaziwa ngasentshonalanga njengoBarbarossa.
I-Suleiman i-navy nayo yakwazi ukuqhuba abantu abatsha abaneenkathazo kwiinkqubo zoLwandle lwase-Indian , isiPutukezi, ngaphandle kwesiseko esibalulekileyo e-Aden kummandla wase- Yemen ngowe-1538. Nangona kunjalo, amaTurks abakwazanga ukukhupha isiPutukezi ekungeneni kwabo kwiindawo ezisentshonalanga Indiya nePakistan.
I-Suleiman i-Magnificent ikhunjulwa e- Turkey njengeMigaqo, uMniki-mthetho. Wayegqithisa ngokupheleleyo inkqubo yezomthetho yase-Ottoman yangaphambili, kwaye enye yezenzo zakhe zokuqala yayikuphakamisa intambo kwizorhwebo kunye ne-Safavid Empire, eyabangela abahwebi baseTurkey ubuncinane njengoko kwenzayo amaPersi. Walawula ukuba onke amajoni ase-Ottoman aya kuhlawula nayiphi na ukutya okanye enye impahla eyithatha njengamalungiselelo ngelixa liphulo, nangona kwintsimi.
I-Suleiman iphinde iguqule inkqubo yerhafu, ilahle iirhafu ezingaphezulu ezenziwe nguyise, kwaye isungulwe inkqubo yerhafu ebonakalayo eyahlukileyo ngokwemivuzo yabantu. Ukuqeshisa kunye nokudubula ngaphakathi kwe-bureaucracy kuya kuba kusekelwe ekufanelekeni, kunokuba kuqhutywe i-whims zamagosa aphakamileyo okanye ukudibanisa nosapho. Bonke abemi base-Ottoman, nabona baphezulu, babephantsi komthetho.
Ukuguqulwa kukaSuuliman kwanika ubukhosi buka-Ottoman ubuchule bokulawulwa kwamanye amazwe kunye neenkqubo zomthetho, ngaphezu kweminyaka engama-450 edlulileyo. Waqalisa ukukhuselwa kwabemi abangamaKristu nabamaYuda bobukumkani base-Ottoman, bexela igazi lama-libels kumaYuda ngowe-1553 kunye nokukhulula abasebenzi baseFama abangamafama base serfowuni.
I-Suleiman i-Magnificent yabafazi ababini abasemthethweni kunye nenani elingaziwa lamashweshwe alongezelelweyo, ngoko wazala abantwana abaninzi. Umfazi wakhe wokuqala, uMahidevran Sultan, wamzalela unyana wakhe endala, umfana onobuqili kunye nekhono elinguMttafa ngelixa umfazi wesibini, owayengumfazi ongumfazi waseUkraine ogama linguHurrem Sultan, wayethanda ubomi bukaSuliman, wamnika oonyana abasixhenxe abaselula.
U-Hurrem Sultan wayesazi ukuba ngokwemithetho ye-harem ukuba uMustafa waba ngumbutho wecala ngoko wayeya kubabulala bonke oonyana bakhe ukuba bawaphephe ukuzama ukumphanga. Waqala i-rumor ukuba uMustafa unomdla wokukhupha uyise ehlalweni, ngoko ngo-1553, uSoliman wabiza unyana wakhe omdala ententeni yakhe emkhosini, wabulala umfana oneminyaka engama-38 ubudala.
Oku kwashiya indlela ecacileyo kwindodana yokuqala kaHurrem Sultan, uSelim, ukuba eze esihlalweni sobukhosi. Ngelishwa, uSelim wayengenayo impawu ezilungileyo zomntakwabo, kwaye ukhunjulwa kwimbali njengo "Selim Drunkunkard."
Ngomnyaka we-1566, uSoliman oneminyaka engu-71 ubudala, wayekhokela umkhosi wakhe ekuhambeni kokugqibela malunga neHafsburg eHungary. Ama-Ottomans aphumelela i-Battle of Szigetvar ngomhla kaSeptemba 8, 1566, kodwa uSuimiman wafa ngenxa yokuhlaselwa intliziyo ngosuku oludlulileyo. Amagosa akhe awazange afune ukuba ilizwi lokufa kwakhe liphazamise kwaye liphazamise imikhosi yakhe, ngoko baqhubeka beyimfihlo kwinyanga kunye nesiqingatha ngelixa amajoni aseTurkey agqiba ukulawula kwawo.
Umzimba kaSulemim ulungiselelwe ukuthutha ukuya eConstantinople - ukuwugcina ungabonakali, intliziyo namathumbu asuswa waza wangcwatywa eHungary. Namhlanje, icawa yobuKristu kunye nesiqhamo sezityalo zimi kwindawo uSuimiman Omkhulu, omkhulu kunabo bonke base - Ottoman , washiya intliziyo yakhe emfazweni.
Imbali yamaPagane yamaOlimpiki
Wedding Princess Diana
Imbali yamandulo yaseRoma: uPublius Terentius Afer, owaziwa ngokuba nguTerence
Yayiyiphi Iminyaka Ede Kwinyanga?
I-Free Online Online Skateboarding Games
Ithini I-Carbon Neutral?
UMthetho weNgcaciso kuMoya ongeyintliziyo kaMariya
8 Iinyaniso Zinyani Nge-Invention yeNombolo
Iingoma ezi-10 eziphezulu zokupapashwa
Iingcebiso zokufunda isiFrentshi njengomntu omdala
Impembelelo yokuThatyathwa Inkcazo
I-Post Oak, Umthi Oqhelekileyo eNyakatho Melika
"I-Antigone" kwi-60 Seconds
I-Hungry Black Hole ithumela i-Beam kwiNdawo
U-Beyonce Ucima Ubunzima Bakho Nge 'Lemonade'
Ngamanye 'Ba' (igrama)
Dakosaurus Iimpawu kunye neenkcukacha